कसरी विभाजन मर्मत गर्ने zip फाईल? - DataNumen
विभाजन मर्मत गर्न zip फाईल (मान्नुहोस् फाईल नाम 'mysplit हो।zip'), कृपया निम्नको रूपमा गर्नुहोस्:
1. डाउनलोड DataNumen File Splitter र तपाईंको कम्प्युटरमा स्थापना गर्नुहोस्।
3. "Join" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
4. "सामेल गर्नुहोस्" संवादमा, सबै विभाजित फाइलहरू छान्नुहोस् र तिनीहरूलाई स्रोत फाइल सूचीमा थप्नुहोस्।
5. निश्चित गर्नुहोस् कि सूचीको भागहरूको अर्डर उनीहरूको मूल अर्डर जस्तै छ, त्यो हो, mysplit.z01 पहिलो हो र mysplit.z1 दोस्रो हो, आदि। र mysplit।zip अन्तिम एक हो।
आवश्यक भएमा उनीहरूको अर्डर समायोजित गर्न "माथि सार्नुहोस्" र "तल सार्नुहोस्" बटन प्रयोग गर्नुहोस्। यदि एक भाग हराएको छ वा भ्रष्ट छ भने, त्यसोभए तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले अझै पनि तिनीहरूको अर्डर राख्नु पर्छ। उदाहरण को लागी, यदि भाग २ हराएको छ, भने मात्र सूचीमा भागहरू mysplit.z2, mysplit.z01,…, mysplit सुनिश्चित गर्नुहोस्।zip.
6. गन्तव्य फाईल नाम सेट गर्नुहोस्, जस्तै mysplit_ विसर्जित।zip
7. "S" क्लिक गर्नुहोस्tart join "भागहरूमा सामिल हुनको लागि गन्तव्य फाईल mysplit_ विसर्जन गरियो।zip.
8. सामेल प्रक्रिया पूरा भएपछि, तपाईं सक्नुहुनेछtart DataNumen Zip Repair र मर्मत mysplit_ विसर्जित।zip सामान्य को रूप मा zip फाईल स्थिर फाईलमा स्प्लिटको सबै भागहरूको डाटा हुन्छ Zip फाईल तपाईं लोकप्रिय संग खोल्न सक्नुहुन्छ Zip उपयोगहरू, जस्तै विनZip, जितRAR, आदि
सामेल, zip फाइल